Ireo maresaka avy any DAGO… – Gasy Egypte
October 28, 2017 November 23, 2017 admin
Ireo maresaka avy any DAGO…Tao anatin’ny vanim-potoana fialan-tsasatra tokoa ny rehetra nadritr’izay telo volana lasa izay. Nisy ireo Malagasy monina eto Egypta no nandalo sy nitsidika ny tanindrazana. Rehefatafaverina indray eto amin’ity toerana ivahinianana ity anefa dia betsaka ireo liana sy manontany ny vaovao avy any Dago…
TOE-KARENA: Nivoaka ary naparitaka manerana ny nosy vao tsy ela akory izao ireo vola taratasy vaovao na dia nitarika resa-be ihany tamin’ny Facebook aza (tsy lahara-
pahamehana; ratsy ny endrika indrindra fa ireo sary amin’ireo vola; …).
Voalohany eo amin’ny tantara ny fisian’ny vola 20.000Ar izay natao ahamora ny
fifanankalozana mihoatry ny 50.000ar. Eo koa anefa ireo olon-dratsy nanararaotra izao fivoahan’ny vola vaovao izao ka manamboatra hosoka sy
sandoka, efa nisy maro ireo tratra tamin’izany. Ny vidiny solika ihany koa dia anisan’ny nanaitra ihany raha oharina amin’ny eto Egypta. Hita tokoa fa tena lafo ny any Madagasikara: miaka-midina eo amin’ny
manodidina ny iray dolara (1§=17LE=3500Ar) amin’izao ny litatra nefa tsy
mahatratra izany akory ny litatra eto Egypta (6LE/litatra). Misy fiantraikany be eo amin’ny andavan’andron’ny vahoaka Malagasy izany ka miovaova foana ireo
vidin’entana eny an-tsena indrindra fa ireo fampiasa amin’ny andavan’andro.
SOSIALY: Tsapa ho namirifiry sy tena nangatsiaka ny ririnina indrindra fa ny tao
Antananarivo nandritra ny fialan-tsasatra. Nifanohitra tanteraka tamin’ny toetry ny
andro teto Egypta ny telo volana lasa teo.
Matetika no ahitana sy ahenoana tranga maneho ny tsy fandriam-pahalemena
any Madagasikara manomboka amin’ireo azo heverina ho madinika indrindra toy ny hala-botry ka tonga hatramin’ny famonoana mihintsy aza. Mampalahelo ny
zava-misy ary tsy mbola voafehy tanteraka izany.
Mitovy amin’izany ihany koa ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta izay tsy
voafehy ihany koa ka maro ireo namoy ny ainy nanomboka ny volana aogositra
lasa teo. Misy ihany ny ezaka sy ny andraikitra raisin’ny fanjakana manoloana
izany izay antenaina hahomby hatrany. Samy mailo sy mitandrina ny rehetra
mba hisorohana ny fiparitahan’io aretina io. Misy ireo toerana izay
ifamezivezen’ny olona matetika no nakatona sy nandraisana fepetra toy ny
sekoly. Raha sanatria ahitana tranga iray na mampiahiahy eny amin’ny seranam-
piara-manidina dia azo antoka fa hikatona avy hatrany izany. Mety ho sahirana
sy hanano-sarotra ho an’ireo Malagasy mivezivezy any ivelany ihany koa ny fidiran’izy ireo any amin’ny tany hafa nohon’ny lazan’ilay valan’aretina pesta.
POLITIKA: Tsy dia resaka mahaliana ny be sy ny maro intsony ny resaka politika any Dago. Hita ny tsy fankasitrahan’ny vahoaka Malagasy ny fitondram-panjakana ary tsyresy lahatra intsony ny amin’izay mety ho fiovana ho entin’ity farany. Efa maro
ireo mikasa ny handimby ny toeran’ny mpitondra ankehitriny satria moa dia aoanatiny fanomanana ny fifidianana amin’ny taona ho avy ny firenentsika.Nandritra ny fandalovana tany Madagasikara dia notontosaina ny Asabotsy 9 septambra 2017
ny fanamasinana ny fanambadian’I “Admin site”, koa mamerina ny arahaba sy mirary soa
indrindra azy ireo.
8 Thoughts to “Ireo maresaka avy any DAGO…”
wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here. http://herpesblitzprotocols.net/
Levitra Venta Libre Achat Levitra Fiable Glucocorticoids Buy Uk Viagra Kamagra Bestellen Priligy 2013 levitra pro pas cher Viagrawithout A Prescription What Are The Side Effects Of Zithromax Propecia Dosage Directions Get Legally Clobetasol Best Website Overseas Pharmacy buy viagra Cialis Que Tal Propecia Caracteristicas Keflex Diverticulitis Viagra Soft Deutschland cialis generic Viagra Cialis On Line Sales Acheter Cialis Tadalafil En Ligne Achat Cialis Net Doxycycline Online Cheap Keflex Antibotic For Dogs cialis price Cialis 2.5
Cost Of Cialis cialis 5mg best price Liquid Amoxicillin Children
Drugs No Prescription Cephalexin And Laying In The Sun Cialis 5mg 10mg 20mg Tadalafil 200 Mg Viagra For Sale
About Amoxicillin Cialis Vente Libre Generic Real Amoxicilina Free Shipping cialis canada Buying Accutane Online Uk Safe
Cephalexin For Puppies cheap cialis Achat De Kamagra En Pharmacie Ciprofloxacin For Diarrhea Amoxicillin Glab
Cialis Viagra Prix Cialis Jelly mail order levitra 90 day supply Dr Reddy Finasteride Buy
Average Cost Of Propecia Effet Secondaire Cialis 20 Mg viagra Comment Durer Plus Longtemps Cialis 20 Pilules Cheap Linisopril